फेरि लकडाउन सहि कि गलत? सरकार भन्छ– के गर्ने तपाईंकै हातमा छ – PathivaraOnline
Home > समाचार > फेरि लकडाउन सहि कि गलत? सरकार भन्छ– के गर्ने तपाईंकै हातमा छ
काठमाण्डाैं । बिगत ४ महिना अगाडि सरकारले १ सय २० दिन लामो लकडाउन अन्त्य गरेपछि यतिबेला जनजीवन सहज बनेको छ । सार्वजनिक बस चल्न थालेका छन् । उद्योग कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय पूर्ववत् अवस्थामा फर्किंदै छन् । साउन १५ गतेदेखि पर्यटन क्षेत्र, होटल, रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सीहरू पनि खुला गरेको छ । आगामी भदौ १ गतेदेखि विद्यालय भर्ना र हवाई उडान पनि सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ ।
भारतबाट आउनेहरूलाई सिमानामै पीसीआर परीक्षण गरेर क्वारेन्टिनमा राख्ने र त्यसो गर्दा कोरोना नफैलिने अपेक्षा लिएको प्रवक्ता गुरागाईंले बताए । दैनिक १० हजारसम्म स्वाब सङ्कलन गर्ने, बाहिरबाट आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रसिङका आधारमा परीक्षण गर्ने र सङ्क्रमण फैलिन नदिने सरकारले नीति लिएको उनले बताए । अहिले नेपालमा औसत दैनिक ३ सय हाराहामीमा सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन् ।
सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा नआएसम्म बिद्यालयमा पठन पाठनको कामलाई अघि नबढाउने भएको छ । विद्यालयमा भर्ना गर्ने तर परिस्थिति सामान्य भएपछि मात्रै पढाइ सुरु गर्ने प्रवक्ता गुरागाईंले बताए । उनले भने– ‘कति विद्यार्थी हुन्छन् भनेर अभिलेखीकरण गर्नका लागि मात्रै विद्यालयलाई छोडिएको छ । पठनपाठन अब जोखिम छैन भन्ने बेलासम्म हुँदैन ।’ तर विश्वविद्यालयको बाँकी परीक्षा भने सुरक्षा सतर्कता अपनाएर गर्न सकिने उनले बताए ।
‘क्याप्टेन’ हेरेपछि दर्शकले दिए यस्तो प्रतिक्रिया (भिडियो)
जेलमा रहेको पति छुटाउन जाँदा प्रहरीसँग ‘एकरात’ को त्यो सर्त